Ny fampiharana 5 tsara refesina amin'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana 5 tsara indrindra handrefesana amin'ny Android
Aaron Rivas | 07/08/2021 20:34 | Nohavaozina amin'ny 08/08/2021 09:00 | Fampiharana Android, Fitaovana Android
Tsara foana ny manana fitaovana fandrefesana na aiza na aiza, satria tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana no ilaina izany. Ny filana an'io dia lehibe indrindra rehefa mianatra kariera mila fandrefesana iniana sy tsy ampoizina ianao. Ary, na dia tsy dia marina loatra aza ireo fitaovana sasany namboarina ho an'ny tanjona fandrefesana marina dia misy ny rindranasa izay manome metatra tena marim-pototra miaraka amin'ny tena marina, ary ireto no fitaovana tsara indrindra hita ao amin'ny Google Play Store for Android.
Amin'ity lahatsoratra fanangonana ity dia mitanisa ireo fampiharana fandrefesana tsara indrindra azonao zahana dieny izao ao amin'ny Play Store etsy ambony maimaimpoana. Izy rehetra dia anisan'ny malaza indrindra ary, miaraka amin'izay, alaina ao amin'ny magazay. Ho setrin'izany, manolotra asa sy fiasa mandroso isan-karazany izy ireo hahazoana fahazoana marina.
Etsy ambany no hahitanao andianà fampiharana tsara indrindra handrefesana ny halavirana amin'ny finday Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra.
1 ARPlan 3D: Mpanapaka, refy amin'ny fantsom-pandrefesana, fandrefesana ny planina gorodona
2 Fandrefesana ny faritra sy ny halavirana
3 CamToPlan - Fatra fandrefesana RA / famarana
4 Mpitondra - refy sentimetatra sy refy
ARPlan 3D: Mpanapaka, refy amin'ny fantsom-pandrefesana, fandrefesana ny planina gorodona
Hanombohana ity paositra fananganana ity amin'ny tongotra ankavanana dia manana isika ARPlan 3, fampiharana iray misy lahasa mandroso kokoa amin'ny fandrefesana faritra, zavatra, perimeter ary maro hafa. Ny mahasoa azy indrindra, na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza ny fandrefesana, dia ny fampiasana Virtual Reality, izay manampy amin'ny fandrefesana an-tsaina ireo voalaza etsy ambony ireo ho ny haavony, ny habakabaka ary ny soatoavina hafa izay sarotra mavesatra matetika.
Azonao atao ny maneho ny kajy sy ny refy amin'ny metrika na emiraisam-panjakana (cm, m, mm, app ho an'ny mpanapaka, santimetatra, tongotra ary mpanapaka ny tokontany). Izy io koa dia manana endrika endrika planeta 2D ary afaka mamorona drafitra gorodona hita maso, miaraka amin'ny Reality Virtual ao anatin'ny segondra vitsy. Tondroy fotsiny izay tianao halaina sy refesina amin'ny fakantsarinao sy voila finday, tsy mila ado intsony.
Etsy ankilany, mamela ny fitahirizana ny refin'ny planina ao anaty rakitra Floorplanner sy mamorona drafitra gorodona 3D amin'ny efitrano misy refy refesina rehetra. Ary koa, raha te hahalala ny kianja amin'ny gorodona ianao, ny kianjan'ireo rindrina ary maro hafa, dia azonao atao ny mahita izany amin'ireo rindranasa ireo; Ny angona azo dia mety ho ilaina amin'ny fanombanana ny habetsaky ny fitaovana fananganana, koa ny ARPlan 3D dia vinavinaina ho fitaovana tsara hanombanana ny refy ihany koa.
Ity rindranasa ao amin'ny Play Store ity dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fivarotany, satria feno tanteraka izy io ary manana ny zava-drehetra hita ao amin'ny ankamaroan'ny fampiharana feno indrindra amin'ny karazany. Izy io dia manana isa kintana 4.4 hajaina, ary koa maherin'ny 1 tapitrisa fampidinana ary fanehoan-kevitra miabo efa ho 50 XNUMX.
Fandrefesana ny faritra sy ny halavirana
Ny anjara asa lehibe an'ity fampiharana ity dia misy fanaingoana haingana ny faritra sy ny halavirana mitovy, mba hahazoana ny metrika mifanaraka amin'ny tianao hikajiana ao anatin'ny segondra vitsy. Manolotra ihany koa ireo fepetra fitehirizana sy fanitsiana, ary koa ny vondrona sy ny antokom-pinoana.
Etsy ankilany, miaraka amina asa fototra izay misy ny safidy hanafoanana ny hetsika fandrefesana rehetra teo aloha. Inona koa, afaka manara-maso ny GPS amin'ny diany izy, mitondra fiara manodidina ny fetra manokana ary manana lahatahiry mandrefy ny tena. Io dia ahafahanao mandefa rohy mandeha ho azy sy "tagged" voaforona miaraka amin'ilay faritra voafantina, adiresy ary zotra mankany amin'ireo namanao na mpiara-miombon'antoka aminao mba hampisehoana azy ireo ilay tranonkala tianao haseho azy ireo.
Mora ampiasaina ity app ity, noho izany dia tsy hanana olana amin'ny fampiasana ny ankamaroan'ny asany ianao amin'ny fandrefesana ny faritra sy ny elanelana amin'ny toerana rehetra sy amin'ny karazana zavatra rehetra. Mandritra izany fotoana izany, malaza be koa izy ao anatin'ny sokajy misy azy, miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny 10 tapitrisa ary naoty 4.6-kintana tena tsara ao amin'ny magazay Android.
CamToPlan - Fatra fandrefesana RA / famarana
Fitaovana iray hafa tena tsara hanaovana ny refy, ny kajy ary izay rehetra tianao ho fantatra momba ny faritra sy ny halavirana dia CamToPlan, fampiharana maimaim-poana izay azo alaina ao amin'ny Play Store ihany koa.
Ny fiasa sy ny endri-javatra dia ahafahana mandray refy amin'ny zavatra rehetra ao anatin'ny segondra ary mora be. Tsy maninona na napetraka mitsivalana na mitsangana ilay zavatra sy ny endriny. Afaka fantatrao ny halavany, ny halavirany, ny faritra misy azy sy ny maro hafa. Izy io dia fanapahana virtoaly sy fandrefesana horonam-peo izay miasa miaraka amin'ny Augmented Reality sy ARCore (amin'ny finday finday mifanentana ihany).
Ity fampiharana ity dia miarakan metatra laser izay ahafahanao mahazo fampahalalana ampy momba ny zavatra sy ny faritra haingana. Amin'ny fanontaniana, azonao atao ny maneho ny kajy azo amin'ny metrika samihafa, ny mahazatra indrindra, toy ny santimetatra sy metatra. Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao ny manoritra ny tsipika fandrefesana ao amin'ny 3D noho ny fakan-tsary mivantana amin'ny horonantsary findainao na latabatra ary manondrana ireo drafitra azo amin'ny fisie sary PNG na DXF.
Ity fitaovana ity, raha jerena ny fiasa sy ny toetra rehetra izay ireharehany, dia mety indrindra ho an'ny mpihaingo satria mamela ny refy handrefesana ny halavan'ny rindrin'ny trano na ny trano, ary koa ny refin'ny zavatra rehetra misy tsipika mahitsy sy manisa faritra amin'ny efitrano, efitra fandroana sy ny toerana rehetra ao anatiny. Noho izany, tsara ny manombatombana ireo sanda ireo amin'ny fananganana, na dia tsara aza ny manamarika fa ny tarehimarika dia mety ho eo ho eo ary tsy dia marina foana.
Ary koa, toy ny hoe tsy ampy izany, ity fampiharana fandrefesana halava afaka manao tombana amin'ny vidin'ny fananganana trano ary miasa toy ny refin'ny fandraketana mandroso.
Developer: Editions Tasmanic
Mpitondra - refy sentimetatra sy refy
Tsy maharary mihitsy ny manana mpitondra eo an-tanana, fa tsy ara-batana, fa iray amin'ny telefaona. Noho io antony io, ity fampiharana ity dia miditra amin'ity paositra ity, satria io dia ahafahanao mandrefy mora foana ny halaviran-davitra sy ny refin'ny zavatra kely dia kely hanehoana ny refy ao anaty santimetatra sy santimetatra.
Izy io, ary hatreto, maivana sy tsotra kokoa ny fampiharana an'ity lisitra ity amin'ireo rehetra natolotray hatreto. Ary ny lanjany dia 1.95 MB ao amin'ny magazay, noho izany ny fampidinana dia tsy haharitra segondra vitsy, na dia efa miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny Internet fotsiny izany.
Tsotra sy mora azo koa ny interface-ny. Sokafy fotsiny dia manomboka mandrefy izay tadiavinao. Azonao atao ny mampiasa azy io ho toy ny mpitondra any am-pianarana mba handrefesana kely amin'ny kahie, boky ary maro hafa. Ny maha-mahasoa azy dia nahatonga azy hanana laza kintana 4.3 ao amin'ny Play Store.
Mba hialana amin'ny tsipika kely dia manana Google Maps izahay, fampiharana GPS izay tsy vitan'ny manolotra ny fahitana ny sarintany an'izao tontolo izao, firenena, tanàna, tanàna ary tanàna, fa koa ny fandrefesana elanelana eo anelanelan'ny teboka roa. Azonao atao ny mahalala ny elanelana misy eo an-tanàna sy amin'ny toerana iray ary saika misy teboka manerantany. Ilaina ihany koa ny mahafantatra hoe hafiriana no hahatongavanao any amin'ny toerana iray haleha raha mandeha tongotra, amin'ny fiara, bisikileta na amin'ny endrika fivezivezena hafa.
Amin'ny lafiny iray, Ity fampiharana ity dia tsy mandroaka ireo fiasa mahazatra amin'ny sarintany sy GPS. Izy io dia iray amin'ny Android feno indrindra ary avy any Google izy io, koa izy io no iray amin'ireo alaina sy be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, zavatra iray izay lehibe indrindra noho ny fametrahana azy mialoha ao amin'ny ozinina amin'ny telefaona finday rehetra. miaraka amin'ny rafitra fiasa. an'ny tsena (ankoatran'ny Huawei, satria tsy manana serivisy Google intsony izy ireo).
Miaraka amin'ny Google Maps dia afaka mihira ihany koa ianao jereo na aiza na aiza amin'ny fomba isan-karazany ary mitadiava na aiza na aiza, trano fisakafoanana sy izay rehetra azonao eritreretina amin'ny alàlan'ny fametrahana ny anaran'ny adiresy ao amin'ny bara fikarohana ihany. Mampahafantatra anao ihany koa izy io raha misy hotely misy, tobim-panompoana. sinema, foibe fiantsenana, hopitaly sy tobim-pitsaboana, trano, toeram-pambolena sy izay rehetra voasoratra anarana tany amin'i Google teo aloha. Ho setrin'izany, miaraka amina fiasa iray ahafahanao mahafantatra ny isan-jaton'ny firaiketam-po hahitanao hoe aiza ny toerana mety tena tianao indrindra.
Mazava ho azy fa manana torolàlana ho an'ny mpitari-dalana ihany koa izy io izay hanampy anao ho tonga amin'ny toerana rehetra tianao ary hampiseho ny halavirana haleha sy ny tombana amin'ny ora hahatongavanao. Manampy anao hisoroka ny fifamoivoizana manelingelina koa izany. Ary rindrambaiko misy rindranasa maherin'ny 5 miliara ary lanja eo amin'ny 28 MP eo amin'ny fivarotana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana 5 tsara indrindra handrefesana amin'ny Android
Ny tetika tsara indrindra amin'ny Mario Kart Tour